Bafuna iimpendulo | News24
Yamkela Mbulawa (24)
Luzibuza imibuzo engaphundulekiyo usapho luka Yamkela Mbulawa kulandela ukunyamalala kweli tyendyana ngaphandle komkhondo.
Lo mfana (ominyaka ingama 24) wagqityelwa ukubonwa kumatyotyombe ase Pandemic, eKhayelitsha, ngoMvulo umhla wesihlanu kuTshazimpunzi. Ukuza kuthi ga ngoku zonke iinzame zosapho zokumfumana zibuye nelize. Phakathi kwezinye iindawo asele ekhangelwe kuzo kuquka imizi egcina iizidumbu eyahlukeneyo efana neSalt River, iTygerberg kwakunye nezibhedlele eziliqela zeli leNtshona Koloni.
Ukanti umnqwazi wosapho awuqini yinto echazwe njengobudlelwane obungekho buhle phakathi kwelityendyana lomfana nesinqanda mathe salo esiminyaka ingama 54. Kubikwa ukuba esi sibini besihlala kunye ixesha elide ePandemic.
Noxa kunjalo amalungu osapho atyhola ngelithi inkcazelo yalo sisi ithe bagqibelana kwiiveki ezintathu ukususela ngosuku ekukholeleka ukuba waduka ngalo.
U-Mlindeli Mbulawa, nongu malume kaYamkela, uthi ebehlala neli tyendyana iminiyaka emininzi kwindawo yako F phambi kokuba liye kuhlalisana nalo sisi.
U-Mbulawa ukwathe kukho ingxelo ezithi uYamkela wathathwa ngabantu abathile baya kumvalela kwelinye lamatyotyombe. “Omnye umfana ohlala apha ekuhlaleni waya kule ndawo ibihlala uYamkela wadibana nomnye umfana amaziyo kude kufuphi nodederhu lweevenkile zaseKhayelitsha, wamxelela ukuba wambona ebethwa ngabantu baze bamfaka ehokini ethile,” ubalise watsho uMbulawa. Wongeze ngelithi kuvakala ukuba eli qela laphuma liphethe iiplastiki ezimnyama zofaka inkunkuma, laze lazifaka ngasemva emotweni.
Utyatyadule wathi inyawo zizele uduka emva kokutyelela isikhululo samapolisa saseLingelethu mayela nale nyewe. Kodwa kunanamhlanje akukabikho mkhondo, kwaye akho mntu sele ekhe wancinwa mayela nokunyamalala kuka Yamkela.
“Le meko isishiye sinxunguphele kakhulu ngoba sibona namapolisa ethe cwaka kungabonakali zintshukumo. Asiyazi eyonanto iqhubekayo ukuza kuthi ga ngoku malunga nokunyamalala kuka Yamkela,” waleke ngelitshoyo uMbulawa.
Ukanti uyichaze njengamampunge inkcazelo yeqabane lika Yamkela lokuba wamgqibela kwiveki ezintathu ezigqithileyo. “Ngenye imini sahamba apha nomnye wabacuphi baseLingelethu sisiya kulo sisi ngenjongo zokumncina malunga nesi siganeko. Okwasothusayo kukubona indlela lo mcuphi awayeziwa ngayo kule ndawo ekhwazwa ngapha nangapha kodwa ke sathula.
“Xa sifika kwakhe safika enxibe izinto zokulala, waze lo mcuphi wamyalela ukuba alungise. Kwathi kusenjalo kwakhala umnxeba wasesinqeni walo mcuphi noye kamva wasixelela ukuba kuthiwa kukho abantu abamjongileyo losisi kwaye ubom bakhe busesichengeni kufuneka bahambe,” utyhole ngelitshoyo uMbulawa.
Kamva uthi eli polisa layalela losisi ukuba kuza kufuneka andwendwele isikhululo saseLingelethu aye kunika inkcazelo ngokwakhe.
Ukanti emva kolu tyelelo azange baphinde bafumane nto inesihlahla emapoliseni mayela nale nyewe.
U-Nkosinathi Ntsabo, nongumhlobo kuMbulawa, ukholelwa ukuba la sisi uyayazi ukuba kwenzeka ntoni kuYamkela.
“Okubonakalayo kukuba aba bantu benze lento kuYamkela bayaziwa, kwaye ngabantu aboyikwayo. Esele sikufuna kukufumana umzimba womntwana ukuze ungcwatywe ngendlela eyiyo. Emva komkhangela kangaka andiqondi usaphila,” utshilo uNtsabo.
Isithethi samapolisa aseLingelethu uSajini Xoliswa Nyalambisa uthe kusaphandwa ngale nyewe.
“Belundwendwele usapho ngamapolisa kunye nabacuphi zombini intsapho zikaYamkela eGugulethu nakoF eKhayelitsha. Nosisi lo kuthiwa ebehlala nalo mfana saye sazithatha inkcukacha kuye malunga nale nyewe,” utshilo uNyalambisa.
Ulebele ngelithi amapolisa ayile kwityotyombe ekukholelwa ukuba uYamkela wayebethelwa kulo, kodwa azange abone bungqina. Uhambise wathi uphando lusaqhuba.